'यहि व्यवस्था रहिरहने हो भने भगवान् राम नै आएर सत्ता चलाए पनि केहि हुनेवाला छैन' - Laganikhabar
शुक्रबार, २८ जेठ २०७८, १५ : ३८ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडौं - हामीले आजभन्दा धेरै पहिलादेखि राजनीतिको नाममा केवल पात्र मात्र परिवर्तन भएको देख्यौं । २००४ सालपछि धेरै परिवर्तनको नाममा धेरैले आफ्नो ज्यानको आहुती दिनुभयो ।
तर त्यसको विकल्पमा केही भएन । भयो त केवल त्यहि मृत्यु भएका परिवारको बिचल्ली । परिवर्तनको नाममा जनताको लागि भन्दै प्रजातान्त्र आयो । यो पनि गरिबको झुपडीमा आउन सकेन । व्यवस्थाको लागि भन्दै २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२/६३ मा गरेको आन्दोलनमा सडकमा उर्लिएको जनलहरले आखिर के पायो त ?
आजसम्म जो पनि बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञहरुले यो भएन त्यो भएन भन्ने एकले अर्कोको कुरामा ध्वजी उडाउने बाहेक कुनै कुरा गर्नुभएको छ ? आफ्नो कथित विज्ञको प्रमाणपत्र झोलामा राक्ने कि कुनै विकल्प दिने विज्ञको पदधारी महानुभावहरु ? यहि व्यवस्था रहिरहने हो भने भगवान् राम नै आएर सत्ता चलाए पनि उही हो । यहि शैली हुने हुने हो भने भोलि नि कुनै परिवर्तन हुने देखिँदैन ।
आहालको पानी फोहोर छ, त्यहाँ पौडिन जो जान्छ, त्यो फोहोर नै हुने हो । त्यहाँ राम जादा सफा र हरि गयो भने फोहोर हुने होइन । हाम्रो आजसम्मको व्यवस्था पनि त्यहि भएको हो । सत्तामा जो हुन्छ त्यो नराम्रो र जो प्रतिपक्षी बनेर बस्छ त्यसले सत्तारुढको विरोधाभाष गाली मात्रै गरेको देखिन्छ ।
आजसम्म आफूलाई विज्ञ भन्नेहरुले कुनै दिन यो विधि नै गलत हो भनेनन् । आजसम्म प्रतिनिधि विचारलाई सिरोधार्य गर्दै २/४ जना प्रतिनिधि मिलेर बनाएको विधानलाई मानिँदै गर्दा कयौं जनताको जीवनस्तर सडकको पेटिबाट माथी उठ्न सकेको छैन । उनीहरुलाई आफ्नो देशको नियम कानुन के हो थाहा छैन । प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जुन तन्त्र आएपनि जनताको परिवर्तन भएको छैन । परिवर्तन तिनीहरुको भएको छ, जसले निमुखा जनतालाई एक छाक भातमा जोडेर पैसामा तुलाना गर्दै चुनावमा मत लिन्छन् ।
अब त्यो प्रतिनिधि व्यवस्था होइन हाम्रो देशले नयाँ विचार धाराको अवलम्बन गर्दै प्रत्येक नागरिकको विचार समेटिने प्रतिनिधि विचार मुलुक व्यवस्थाको मूल बाटोमा हिड्नुपर्छ । यो व्यवस्थामा व्यक्तिको पुजा नगरी श्रेष्ठ विचारले कानून बनाउने गर्दछ । यो व्यवस्थामा हरेक क्षेत्रमा हरेक गाउँको एक-एक घर नबिराई राम्रो विचारको खोजी गर्दा देशको कुना-कुनासम्मको जनताको विचार बुज्न सकिन्छ । जस्को विचार सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ, त्यो नै बलियो विचार हुनेछ । चाहे त्यो रुकुमको किसानी दाइ हुन्, चाहे मेचीको, चाहे धनी होस्, चाहे गरिब । विचारमा श्रेष्ठ जो हुन्छ, त्यो विचार नै जेष्ठ या लागू गरिन्छ । यो व्यवस्था जनता आफैले लेखिने हुनाले जनताको सुदृढ हुने पक्का छ । यो व्यवस्थामा हरेक गाउँ गाउँमा हरेक व्यक्ति पहिला आफ्नो मन परिवर्तन गरेर घर, समाज र गाउँ हुँदै जिल्ला र केन्द्रसम्म परिवर्तन गराउने छ । व्यक्ति आफैंमा देशको जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । उसले आफू र घरदेखि समाज परिवर्तनमा तल्लिन भएर लाग्छ । जबसम्म गाउँ र समाजको परिवर्तन हुँदैन तबसम्म जनता सुखी र देश समृद्ध हुन सक्दैन । त्यसैले अब प्रतिनिधि विचार मुलक व्यवस्थाको मुलधारमा आउन सम्पूर्ण देशप्रेमीहरुलाई आह्वान गर्दछु । जय देश जय जनता ।
राष्ट्रिय स्वयंसेवक नेपाल